Mas'uul sare oo ka badbaaday Qarax Gaari oo ka dhacay Muqdisho
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa si dirqi ah uga badbaadey qarax loogu xiray gaarigiisa kaasoo ku qarxay shalay galab gudaha magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa waxa uu ahaa mid culus oo laga maqlay xaafado kamid ah caasimadda, iyadoo wararka ay sheegayaan in gudoomiyaha uu ka degay gaariga kahor inta uusan qarxin.
Saraakiisha booliska Muqdisho ayaa sheegay in Gaariga lagu joojiyay meel bar-koontarool ah, oo ciidamada ay ku leeyihiin degmada Dharkeenley, islamarkaana uu goobta ku qarxay xilli la isku dayay in laga furo walxaha qarxa.
Wali lama soo warin khasaaraha dhimashad, balse wararka laga helayo laamaha amaanka ayaa sheegay in labo Askari ay ku dhaawacmeen, islamarkaana uu gudoomiyaha ka badbaaday isagoo bad-qaba.
Al Shabaab, oo ah kooxda khatarta amni ku ah Soomaaliya iyo dalalka deriska ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka lala damacsanaa in lagu khaarijiyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose.
Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha Qarax ka dhacay Afgooye
Soomaliya 02.03.2018. 13:44
Al Shabaab ayaa kordhisay maalmihii lasoo dhaafay weerarada ka dhanka ah dowladda...
Wararkii ugu dambeeyay Qarax culus oo ka dhacay Wanlaweyn
Soomaliya 30.05.2018. 11:14
Ciidamo Ajnabi ah oo lagu weeraray Muqdisho
Soomaliya 12.07.2018. 22:26